Akhriso”Shuruudaha Musharaxiinta Madaxweynaha Iyo Ku Xigeenka Puntland Oo Lagu Dhawaaqey | Berberatoday.com
Akhriso”Shuruudaha Musharaxiinta Madaxweynaha Iyo Ku Xigeenka Puntland Oo Lagu Dhawaaqey
Garoowe(Berberatoday.com)-Waxaa maanta lasoo saaray shuruudaha laga doonayo musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland.
Gudiga doorashada Puntland ayaa sheegay in Musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland laga doonayo in ay buuxiyaan shuruudaha isdiiwaan gelinta oo ay qeyb ka yihiin soo gudbinta araajida musharaxnimo iyo bixinta lacagaha isdiiwaan gelinta.
Gudiga ayaa sheegay in qabashada araajida musharixiinta la bilaabayo 12: duhurnimo oo maanta kuna beegan taariikhda 5-ta bisha January iyadoona ay sheegeen in ay ku ekaan doonto maalinta Beri saacadu marka ay tahay 4:00 galabnimo.
Musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland ayay gudigu sheegeen in laga doonayo bixinta lacag dhan $20,000 oo doolar halka ku-xigeenkiisana laga qaadayo $10.000 oo doolar taas oo ah lacagaha isdiiwaan gelinta.
Waxaa sidoo kale gudiga ay sheegeen in musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa laga doonayo in da’dooda aanay ka yaraan 40 sano iyadoo la waafajinayo dastuurka qodobada ku xusan dastuurka Puntland.